MacBook Air Hard Drive Guide Recovery
Sidee baan ka MacBook Air Hard Drive soo kaban karto, Data
My dhibaato waa in aan MacBook Air demiyo ee lama filaan ah, oo aan reboot, galalka badan oo aan Macbook Air tageen. Kaliya waxaan doonayaa in aan weydiisan waa hab aan laga yaabaa in ay dib uga soo this MacBook aan Air ama ay gaari ku adag u hesho xogta aan. Run ahaantii waxaan u baahan tahay in ay dib u hanato qaar ka mid ah files muhiim document ka.
Bilgium kuw sida dacwadda ku xusan, MacBook Air jebiyey ama shil ka dhigaysa qalab aad waxtar lahayn ma ahan oo keliya, laakiin waxay kale oo keentaa macluumaadka qiimaha badan ee aad kaa fogaado. Saraaxa hadlayay, xogta aad badiyay korinaynaa ku wadid aad MacBook Air ee adag. Iyo ayaad ugu soo ceshano karo xogta ka MacBook Air adag la wado iyadoo la kaashanayo MacBook Air utility ah soo kabashada drive adag.
Qaado Wondershare Data Recovery for Mac sida tusaale, taas MacBook Air adag la wado kabashada xogta waa socon ee soo kabsaday xogta labada caafimaad oo ku burburtay MacBook Air. Waxay kaa caawinaysaa in aad dib u soo ceshano tiro ka mid ah noocyada file oo ay ku jiraan sawirrada, videos, files audio, emails, document files, iwm Waxaad kartaa MacBook Air download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery for Mac iyo soo celinta xog adag la wado in hab fudud.
Talooyin Macbook Air Hard Drive Recovery
Haddii wadid aad Macnook Air ee adag waa geli karin ama jabay, waxaad u baahan doontaa si aad u weydiiso adeegyada rasmiga ah ee Apple caawimaad ama u soo dir certer adeeg dayactirka. Oo anigu waxaan ka xumahay in aan kuu sheego laga yaabaa in aadan suurtowdo inuu ka soo kabsado xogta ku yaal.
Laakiin haddii aad kaliya ma reboot kartaa Macbook Air iyo wadid aad Macbook Air ee adag waa caafimaad, waa inaad ku xirmi kartaa Mac kale firewire, ka dibna waxaad ka heli kartaa Wondershare Data Recovery for Mac iyo raac tilmaan dib u soo ceshano xogta ka.
Qabtaan MacBook Air Hard Drive Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Data Recovery for Mac aad Macbook Air
Haddii aad MacBook Air weli ma sii shaqeyn karo, kaliya aad u baahan si loo soo dajiyo Wondershare Data Recovery for Mac ku yaal.
Ka dib markii socda barnaamijka, waxaad heli doontaa interface la fursadaha kabashada qaar ka mid ah. Fadlan akhri tilmaamaha iyaga ka mid ah oo loo doorto dariiqada ugu fiican ee aad u soo kabashada. Halkan, waxaan qaadi karo "lumay Recovery File" sida isku day ah.
Fiiro Gaar ah: Waa in aad qaadato aad MacBook Air adag la wado oo xirmaan Mac kale haddii aad rabto in aad soo kabsado files ka jabay MacBook Air.
Tallaabada 2 Scan MacBook Air adag drive
Markaas kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan drive adag aad doonaysid in aad dib u soo ceshano xogta ka oo guji "Scan" inaad raadiso files waxa on.
Fadlan dooro nidaamka file midigta ah ee drive adag MacBook Air furmo. Haddii aad drive MacBook Air adag ayaa formatted, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo suuqa aad.
Tallaabada 3 Ladnaansho xogta ka drive MacBook Air adag
Marka scan ka baxayo, ku jira oo dhan recoverable lagu qori doonaa fayl ee bidix ee suuqa kala barnaamijka. Waxaad ka arki kartaa magacyada file in lagu hubiyo sida badan files aad soo kaban karto, iyo xitaa noqon doonaa in aad awoodid in ku eegaan sawirada ka hor soo kabashada.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad doonaysid in aad ka bogsanayaan oo guji "Ladnaansho" in ay doortaan gal ah ku saabsan Mac sii files soo kabsaday.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo files ka dib si aad u MacBook Air adag la wado inta lagu guda jiro dib u soo kabashada.